ကဲရကယ်တောကြောင်၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ကဲရကယ် ကဲရကယ် ဖြစ်သည်။ ကဲရကယ်ကြောင်ရိုင်းဟုလည်း ခေါ်သည်။ အာဖရိကတိုက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသော ကြောင်ရိုင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား အလယ်အလတ် ရှိသည်။ ကိုယ်ထည်တုတ်ခိုင်သည်။ ခြေတံရှည်သည်။ မျက်နှာတိုသည်။ နားရွက်အမွေးစုများ ရှည်သည်။ စွယ်သွားရှည်သည်။ သားမွေးမှာ အနီရောင် သမ်းသော အဝါရောင် (သို့မဟုတ်) သဲရောင် တပြင်တည်း ဖြစ်သည်။ ခါးနားတဝိုက်တွင် အရောင်ဖျော့ပြီး အနီရောင်သမ်းသော အမှတ်အသားများ ရှိသည်။ ပခုံးအမြင့် ၄၀ မှ ၅၀ စင်တီမီတာ (၁၆ မှ ၂၀ လက်မ) ရှိသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၈ မှ ၁၈ ကီလိုဂရမ် (၁၈ မှ ၄၀ ပေါင်) လေးသည်။ ညအချိန်တွင် ကျက် စားသည်။
အာဖရိကတိုက်တွင် ကဲရကယ်တောကြောင်ကို ဆဟာရ သဲကန္တာရ၏ တောင် ဘက်ဒေသများတွင် တွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း အာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်း တွင်မူ ရှားပါးသည်။ အာရှတိုက်တွင်မူ ယင်းတို့ကို အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းအထိ တွေ့ရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Avgan, B. (2016). "Caracal caracal". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "Species Carcal caracal"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ p. 533။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကဲရကယ်တောကြောင်&oldid=710301" မှ ရယူရန်
တူရကီနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် တွေ့ရှိရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။